Puntland oo jawaab ka bixisay dalabkii madaxweyne Farmaajo – Hornafrik Media Network
Dowladda Puntland ayaa waxay jawaabtay codsigii madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadanaa in lasii daayo shaqsiyaad ku xiran magaaladda Boosaaso.
“Dadka eedeysaneyaasha oo Garowe iyo Boosaaso ku xiran, madaxweyne ma amrin in lasoo xiro, waxaa loosoo qabtey in ay ku xadgudbeen shuruucda u degan Puntland,” ayuu yiri Maxamuud.
“Dadka hadda ka hadlay muwaadiniin lasoo xiray, ma aqaano ujeedada ay ka leeyihiin, ma joogno jaziiratul waaq-waaq, dalka sharci buu leeyahay, horeyna dad waa lasoo eedeyn jiray, waana lasoo xeri jiray,” ayuu hadalkiisa raaciyay Xeer Ilaaliyaha.
Mudane Maxamuud ayaa intaasi raaciyey: “Kiiska marka uu taagan yahay baaris illaa iyo kiiskaa qofka lagu helo ama lagu waayo cid soo faragelin kartaa ma jirto ama talo ka bixin karta oo aanan ka ahayn hay’addaha sharciga”.
“Eedeynta shaqsiyaadkaasi laba meelood ku xiran waxaan rabnaa in aan sharciga hor-geyno. Hadii eedeynta ay noqoto mid maan-gal ah ciqaabta uu sharcigu ogol-yahay baa ku dhici doonta, hadii lagu waayo, waan sii deyn doontaa Maxkamadda,” ayuu Maxamuud xusay.
Xeer Ilaaliyaha guud ee Puntland ayaa intaasi ku daray: “Madaxweyne Deni baan sii deyn karin, Madaxweyne Farmaajo baan sii deyn karin; ra’iisul wasaaraha ayaa sii deyn karin, sharci baa soo xiray, sharcigaana sii deyn kara”.
Jawaabta Puntland ayaa timid xilli goor sii horeysay qoraal lagu daabacay bogga Villa Soomaaliya lagu sheegey in Madaxweyne Farmaajo dalbadey in saddex nin oo ku xiran Boosaaso xorriyadooda loogu celiyo si “shuruud la’aan”.